Mpikatrok’i Hong Kong nodidiana higadra noho ny fiaraha-mahatsiaro tamin’ny taona 2020 ny famonoana tao an-kianjan’ny Tiananmen · Global Voices teny Malagasy
Mpikatroka 26 amin'ny mpandray anjara an'arivony no nosamborin'ny polisy sy nosamboriny
Voadika ny 14 Mey 2021 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, 日本語, English
Nampian’ilay mpitsara ao amin'ny distrika, Stanley Chan, sazy 10 volana an-tranomaizina ny sazin'i Joshua Wong, mpikatroka malaza mpomba ny demaokrasia, izay efa migadra ankehitriny mandritra ny 13,5 volana taorian'ny niampangana azy tamin'ny fikarakarana sy fitarihana fivoriambe tsy nahazoana alalana tamin'ny taona 2019.
Amin'ireo Hongkonger 20 000 mahery nandrehitra labozia tao amin'ny Victoria Park, dia nanavaka mpikatroka 26 hosamborina sy hotsaraina ny polisy. Ny roa tamin'ireo mpikatroka, Nathan Law sy Sunny Cheung, no nandao an'i Hong Kong nanao sesitany ny tenany tany ivelany.
Hoy ny mpitsara tamin'ny didim-pitsarana:
Benedict Rogers, lehiben'ny Hong Kong Watch ekipa mpiaro ny zon'olombelona monina any Londres, naneho hevitra momba ilay fe-potoana am-ponja mihoa-pampana:
Amin'ity taona ity, voarara tanteraka ny fiareta-tory amin'ny 4 Jona ao Victoria Park, satria nampiato ny fampanofana toerana sy fotodrafitrasa ny Sampan-draharahan'ny Serasera sy ny Kolontsaina, noho ny olana ara-pahasalamana.
Na eo aza ny fandrahonana dia nanohy ny hetsika fahatsiarovana 4 jona isa-taona ny HK Alliance. Tamin'ny 2 Mey, ny sefon'ny lefitry ny HK Alliance, Albert Ho sy Chow Hang-tung — izay miatrika fiampangana roa ihany koa noho ny fandrisihana sy ny fandraisana anjara tamin'ny fiareta-tory tamin'ny herintaona— no nitarika ny fombafomba fahatsiarovana isan-taona teo anoloan'ny Andrin'ny Henatra ao amin'ny Oniversite Hong Kong. Xinqi Su, mpanao gazety ao Hong Kong, no nandrakitra ny hetsika:
Taorian'ny didim-pitsarana, nanoritra i Chow: